दिनेश लिम्बु Archives - Lokpati.com
Tag - दिनेश लिम्बु
‘मदन भण्डारी बाँचेकाे भए बहुदलीय जनवादमै अल्झिन्थे होला !’ (बहस)
पवित्र मनसायबाट जबजको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। मदन भण्डारीका त्यतिबेला भाषण र वैचारिक मन्तव्यले त्यही छनक दिन्छ। मदन भण्डारी बाँचेका भए जबजको रणनीतिक कार्यदिशा कसरी तय गर्थे ? संविधानभन्दा माथि रहेका राजा श्रीपेच फुकालेर मदन...
जनताको बहुदलीय जनवाद क्रान्तिको सिद्धान्त होइन
काठमाडौं। राजनीतिक टिप्पणीकार दिनेश लिम्बुले तात्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको दार्शनिक सारतत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको मुल कार्यदिशा...
जनताको जनवाद : मार्क्सवाद कि बहुलवाद ? (बहस)
दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा भएको छ। यो नेकपा एसियाको तेस्रो ठूलो र दक्षिण एसियाको पहिलो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी हो । यस अर्थमा पनि यो एकताले रक्षात्मक स्थितिमा...
चुनावले ठूलो दुर्घटना ल्याउँछः भट्टराई